I-CopyPaste Pro Mac - # 1 Kopisha Namathisela Umphathi Wesiqeshana Esiningi | Plum Okumangalisayo%
I-CopyPaste Pro Mac - # 1 Kopisha Namathisela iMphathi Wesiqeshana Esiningi
Okusheshayo: 12 / 12 / 21
Dinga: IMac 10.13-12.0 +
I-CopyPaste Pro ye-Mac - Isiphathi sebhodi lokunamathisela - Umshini wesikhathi webhodi lakho lokunamathisela
Nge-CopyPaste qala ukusebenzisa isici esinamandla kakhulu kukhompyutha yakho. Leso sici yi-Copy & Paste esetshenziswa kaningi nsuku zonke ngawo wonke umsebenzisi wekhompyutha nokuthi ngebhodi yokunamathisela eyodwa nje. ICopyPaste bekungeyokuqala futhi iyinsiza yebhodi yokunameka edume kakhulu yokubonisa, ukufaka kungobo yomlando nokuhlela amabhodi wokunameka amaningi. Bona futhi uhlele noma yisiphi isiqeshana emlandweni wakho wamakhophi noma kuzinqolobane zesiqeshana ezingunaphakade. Gcina amabhodi wokunameka amaningi ngokuqala kabusha. Isebenziseka ngendlela emangalisayo. Isilondolozi sesikhathi esihle, nesisindisa impilo sabo bonke abasebenzisi be-Mac.
“Angikwazi ukucabanga ikhompyutha ngaphandle kwe-CopyPaste” - USir James Galway, Umqashi Odumile Emhlabeni
I-CopyPaste Pro Mac - # 1 Kopisha Namathisela ubuningi beMphathi weClip Clip
“ICopyPaste yenze impilo yami yaba lula kakhulu futhi angikwazi ukucabanga ikhompyutha ngaphandle kwayo. Uma ubhala okuningi kukhibhodi futhi usika futhi unamathisela leli yithuluzi elifanele lomsebenzi. Gcina zonke izinhlobo zezinto ezinjengezihloko zezinhlamvu namakheli ukuze ufake lapho kuthinta ukhiye. Ilula kakhulu ukuyisebenzisa. ”
USir James Galway, Umhlaba owaziwa nge-Flautist
Lolu hlelo lokusebenza (lwe-CopyPaste) luyi-100% AMAZING futhi ngisebenzisa izici zalo eziningi izikhathi eziyizinkulungwane nsuku zonke - ngokoqobo. Kube yisilondolozi sesikhathi, ukusebenza kahle kokuhamba kokuhamba komsebenzi, nokunye okuningi.
UKevin Bardon6 / 12 / 2021
"I-CopyPaste Pro: Ibhodi yokunamathisela yamandla yomsebenzisi we-OS X yamandla. Ufuna ukuhlela okusheshayo nangempumelelo ngokwengeziwe? Udinga i-CopyPaste Pro ye-OS X. Ukuthuthuka kwejubane lapho unokuhlela okuphindaphindwayo okumele ukwenze kuyamangalisa. Leli ithuluzi lamandla ngokuqinisekile kumsebenzisi osebenzisa amandla futhi uthola isilinganiso seGearhead kwezingu-5 kwezingu-5. "
UMark Gibbs, uGearheadUmhlaba Wenethiwekhi
Bheka enye yezinsiza zami ze-Mac engizithandayo. Ibizwa ngokuthi yi-CopyPaste Pro. Kuyimenenja yebhodi yokunameka eningi. Lokho kusho ukuthi noma yini oyinqumayo noma oyikopishayo igcinwa kumtapo wezincwadi ukuze ikwazi ukunamathiselwa futhi ngokuhamba kwesikhathi ngaphandle kokuyithola bese uyikopisha futhi. Leso yisikhathi esikhulu sokonga.
UTera Thomas O'BrienUTera Uyakhuluma
Ich muss mich eigentlich fast selbst über mich selbst wundern, dass ich dieese Software noch nicht eher gefunden und im Einsatz hatte. I-Mittlerweile kann ich mir schon gar nicht mehr vorstellen, wie ein Mac ohne dieese App „funktionieren“ soll. Futhi i-gehe jetzt mal von meinem „Arbeits-Mac“ noma, i-Dem ich den gan Tag sitze und erst spiel die Software ihren Nutzen sorichtig aus. Ngisanda kuthola ukuthi ngizokwenza kanjani nge-MacBook Pro kanye ne-Software ethuthukisiwe. Seltham nicht. 😉I-Aber wie in der Überschrift schon ingedeutet: „CopyPaste Pro is sowas ähnliches wie eine TimeMachine für die Zwischenablage.“ I-glaube dieser Satz beschreibt kurz and bündig, was die Software leisten kann.
UMarkus Ostermeier, Bloggerostermeier.net
"Alukho usuku oludlulayo engingalisebenzisi i-Copy Paste. Ngiyabonga futhi ngomsebenzi omuhle kakhulu."
"I-CopyPaste Pro iyisibonelo sohlelo lokusebenza oluguquguquka kakhulu ngoba, ngokungafani nezinye izinhlelo zokusebenza zokukhiqiza, inokusetshenziswa okuningi okuhlukahlukene. Abathuthukisi bathuthukile emsebenzini onjalo wekhompyutha futhi imiphumela iyingcweti.Umthuthukisi we-CopyPaste Pro, Plum Amazing, kubonakala kubonisa lokhu kwezinye izinhlelo zayo - ukuthatha izinhlelo zesistimu ezilula nokuzimpompa zigcwele i-oomph kanye nezici ezengeziwe.I-CopyPaste Pro ingisize kakhulu ukuthi ngilondoloze isikhathi futhi kuyajabulisa ukuyisebenzisa - izinto ezilula futhi ezinothile.Abanye abantu bangase bacabange, kodwa-ke, ukuthi intengo yokudayisa engu-$30 yohlelo incane kakhulu ongayisebenzisa entweni nje elula kodwa uzothola ukuthi uma usuyitholile, uzozibuza ukuthi wenze kanjani ngaphandle kwayo."
UJames Cull Ukubuyekezwa kwe-AppStorm
I-CopyPaste Pro uhlelo lokusebenza lokunameka oluhamba phambili lwe-Mac. I-CopyPaste Pro è l'utility più flessibile e potente tra quelle a disposizione sul mercato per fare anche l'impossibile con il copia and incolla: gestisce clip multiple, crea archivi di clip di testo anche editabiliabili, fornisce access agli elenchi con palette flottanti, accetta il trascinamento direttamente da safari, non perde la memoria neppure dopo il riavvio del Mac.
I-MaCityI-Italian Mac Blog
"I-CopyPaste Pro mhlawumbe iyithuluzi eliwusizo kakhulu ongakaze wazi ukuthi uyalidinga. Izici zalo ezibaluleke kakhulu zithuthukisa umkhiqizo wakho wansuku zonke."
“Uma Ubungaba Nethuluzi Lokukhiqiza Elilodwa Ku-Mac Yakho Bese ukhetha i-CopyPaste Pro. ICopyPaste Pro ihleli ngemuva, ilindele ukusetshenziswa, iqoqa ngokwethembeka futhi igcine noma yini oyikopishile noma oyinqumile, ilungele ukunamathisela izinto nomaphi lapho ufuna khona. Ngaphandle kohlu olude lwezici zamandla, izisekelo zanele ukuqalisa futhi kulula ukusetha nokusebenzisa. Umuntu othile obizwa ngokuthi yi-CopyPaste Pro Time Machine yebhodi lakho lokunamathisela. Yize ingabukeki njenge-Time Machine, ithwebula futhi igcine noma yini ongayikopisha kwi-Mac yakho futhi iyenze itholakale noma nini ngokuzayo ukuthi inamathiselwe. "
UJack D. MillerMac360
"Ukusetshenziswa okubalulekile kwe-Mac yakho. Ngaso sonke isikhathi uma ukopisha okuthile ukuze unamathisele kwenye indawo, into oyikopishayo ibanjelwe kubhodi yokunamathisela. Inkinga nge-Clipboard engaphakathi kwe-Mac OS X ingabe ukwakha ukuphatha into eyodwa ngasikhathi sinye: wouldn ' Kungasiza uma ungafaka izinto eziningana lapho, ukuze ukwazi ukunamathisela konke kudokhumenti efanayo noma kwelinye ifayela leprojekthi ngaphandle kokushintshanisa phakathi kwezinhlelo zokusebenza? Nge-CopyPaste Pro, ungakwazi. "
USir James Galway,Umhlaba owaziwa nge-Flautist
"Njalo nje kuvela ucezu lwe-shareware olusenza sizibuze ukuthi besiphila kanjani ngaphandle kwalo - okuyi-CopyPaste-X, insiza yebhodi yokunameka ye-turbo kuma-steroids."
UNiko CoucouvanisI-MacAddict Magazine
Eyokuqala (ekhishwe ngo-1997) futhi ethandwa kakhulu ukusetshenziswa kwebhodi yokunameka okuningi ukubonisa, ukugcina umlando nokuhlela amabhodi wokunameka.
Umshini wesikhathi webhodi lokunameka.
Bona futhi uhlele noma yisiphi isiqeshana emlandweni wakho wamakhophi noma ugcine amakhophi kuzinqolobane zesiqeshana ezingunaphakade. Gcina amabhodi wokunameka amaningi ngokuqala kabusha. Iwusizo kakhulu, isilondolozi sesikhathi, isilondolozi sempilo sabo bonke abasebenzisi beMac. Uhlelo lokusebenza lokunameka oluhamba phambili.
I-CopyPaste yi-original, eyodwa futhi kuphela umklomelo wokuwina isihleli sebhodi lokunameka nokusetshenziswa kokugcina umlando.
I-CopyPaste ibalulekile kubaqalayo, ababhali, abahleli, abadwebi bezithombe, abameli, abafundi, amabhizinisi asekhaya, abathwebuli bezithombe zedijithali, noma ngubani osebenzisa ibhodi lokunamathisela.
I-CopyPaste iyihabhu ledijithali lezinto zokunamathisela nezinye izinhlobo eziningi zedatha. Kulula ukuyisebenzisa, yonga isikhathi futhi ikuvumela ukuthi wenze okuncane futhi ufeze okuningi. Yizame mahhala futhi ubone ukuthi imenenja yebhodi yokunameka ibaluleke kangakanani.
Ngesinye isikhathi izinhlelo zokusebenza bezingenakho ukuxhumana okuhlangana. Ngemuva kwalokho kwafika iMac futhi esinye sezici zayo ezinhle kwakuyibhodi lokunameka elikuvumela ukuthi ukopishe into kusuka kuhlelo lokusebenza bese uvula enye bese uyinamathisela. Lokho bekuyizinguquko ngo-1985 kepha manje sekuyikhulu leminyaka elizayo futhi ukukopisha nokunamathisela kwi-Mac OS akukaze kuguquke ngokuqhubekayo - ngisho naku-OS X yanamuhla. Kukangaki uzithola ushintsha ubuya emuva naphambili phakathi kwezicelo ezikopisha into eyodwa isikhathi, ufisa sengathi ungakopisha hhayi into eyodwa kuphela kodwa ezimbili noma ngaphezulu ngasikhathi?
I-CopyPaste Pro ingenye yezinhlelo zokusebenza engizibheka njenge-INDISPENSABLE ekuhambeni kwami ​​komsebenzi. UJulian Miller uyasabela KAKHULU futhi uyasiza! Ngingaluleka kakhulu lolu hlelo lokusebenza ne-Plum Amazing!
UJim TerrinoniIMacUpdate, 9/7/20
CopyPaste Pro. Lolu hlelo lokusebenza lusebenza buthule ngemuva, njalo lukulungele ukubizwa, futhi ngilusebenzisa nsuku zonke. Kungisindisa isikhathi esiningi. Zenzele umusa bese ulanda lolu hlelo lokusebenza olubalulekile.
UMarcel DufresneUkubuyekezwa kweMuse, Meyi 28, 2020
Uhlelo lwakho lokusebenza "olulula" lwandisa umkhiqizo kimi ngamanani alinganisekayo. Njengomculi, ngizizwa nginamandla ngezinqumo ezisheshayo nezandisiwe. Njengombhali, ngiyabona ukuhlela okuningi, imiphumela egxile. "
Amagama athile nezisho kusetshenziselwa izici ezahlukahlukene ngaphakathi kwe-CopyPaste. Kungasiza ukuwakhumbula futhi uqonde incazelo.
kuyinto ekopishiwe, isb amazwibela ombhalo
yibhodi lokunameka lesistimu
yisiqukathi seziqeshana zesikhashana esitaki
Isiqeshana Ingobo yomlando
iqoqo leziqeshana kufayela
isetshenziselwa ukubuka nokushintsha iziqeshana
ngamathuluzi asebenza kuzo zonke izinhlelo ngebhodi yokunameka
Ukubuyekezwa kwevidiyo yi-MacUpdate
Ukufaka ku-Mac OS 10.14, Mojave
CopyPaste - Ukufaka, Umlando Wesiqeshana kanye Nengobo Yomlando Yesiqeshana
CopyPaste - Isiqeshana se-Clip ne-Clip Palette
CopyPaste - Amathuluzi
Abasebenzisi kanye nababuyekezi Rave mayelana CopyPaste
Okokuqala (1997) Ukubuyekezwa Kwe-CopyPaste Yokuqala Kwama-Multi-Clipboard Tool
I-CopyPaste: I-Scoffer ingasekho
Umoya we-CopyPaste uyancomeka, futhi - uma usuhlangabezane nokusebenziseka kwawo - awukwazi ukuqonda ukuthi kungani ingakhiwanga kwi-Mac OS System iminyaka.
- UMat Neuberg, Buyekeza ku-TidBits, 2/3/1997
I-MacUser Iklonyeliswe Ngekhophi
- ihlola izibuyekezo masonto onke ngemuva futhi ikwazisa kuphela uma kunokuthile okusha. ayisahloli ekuqaliseni ngakunye
- ukungena ngemvume ekuqalisweni okulungiselelwe i-monterey
- okunye ukuthuthukiswa okuncane
- Imanuwali ebuyekeziwe kusuka ku-http kuya ku-https
- Kuhlanganiswe ne-xcode 13
- ezinye izinguquko ezincane.
- lungisa i-6.7.92 edale inkinga yokunamathisela kwabanye abasebenzisi.
- isebenza kahle ku-monterey mac os 12
- ilungisa ukukhishwa ikhetha ukukhipha kokubili i-adobe indesign ne-apple keynot
- uhlelo lokusebenza notarized
- izinguquko ezincane.
- engeza i-notarization yohlelo lokusebenza. isici esisha sokuphepha esivela ku-apula.
- umyalo c no-c kulungisiwe. kumbhalo okhethiwe awukopiseli ukuqopha u-0 kepha ubeka leso siqeshana endaweni yokuqala etholakalayo kungobo yomlando. okuningi kusencwadini.
- command c and command v umsebenzi
- ukulawulwa kokukhethwa kukho komyalo c kuvula iphalethi yengobo yomlando njengangaphambili
- ukulawulwa kokukhethwa kukho komyalo v kuvula iphalethi lomlando njengakuqala
- umyalo c (nenombolo noma incwadi) amakhophi kuleyo slot yomlando njengangaphambili
- umyalo v (nenombolo noma incwadi) okunamathiselwe kusuka kusilondolozi sokugcina kungobo yomlando.
- I-clickclip (khetha umbhalo bese ubamba isikhathi sangokwezifiso) isebenza njengakuqala
- lungisa ukungavumelani kwe-mac os 10.14.4 okuphule umyalo c.
- Zonke izinhlelo zokusebenza nezinhlelo zokusebenza ezingaphakathi kwamafolda kufolda yohlelo zizokhombisa futhi zingakhethwa ohlwini lokukhishwa.
- ukukhishwa kubhalwe ngama-alfabhethi futhi phezulu ungachofoza ukuhlunga noma ukuhlunga.
- kungezwe 'Uhlu Lokukhishwa' ngakho-ke luyatholakala kuzo zonke izilimi.
- imanuwali ebuyekeziwe yohlu olusha oluthi 'Uhlu Lokukhishwa'
- Ibuyekeze zonke izithombe-skrini zepaneli ngalinye langaphambili
Siyabonga kubo bonke abasebenzisi ngempendulo yabo enhle!
- kungezwe 'uhlu lokukhishwa' kuthebhu kokuncamelayo. amandla alindelwe okudala ukukhipha izinhlelo zokusebenza ekusetshenzisweni nge-copypaste. nazi izibonelo. ingasetshenziswa nezinhlelo zokusebenza ezingalandeli imihlahlandlela yebhodi lokunamathisela le-apula. futhi nabaphathi be-password. ukubonga okukhulu ku-eric crouch, okwakamuva kakhulu kulayini omude wabantu abancome ukungeza lesi sici.
- lindela izibuyekezo eziningi. uma uneziphakamiso zohlelo lokusebenza noma imanuwali usazise
- uma uthenge i-copypaste ngaphezulu eminyakeni emi-2 eyedlule ungathola isaphulelo eminyakeni engu-2 ngaphezulu yezibuyekezo nosekelo ngokuxhumana nathi.
- ukhumbula iphaneli lokugcina elikhethwe kuzintandokazi. sibonga ugabriel dorado ngokuhambisa le bug.
- ithuthukisa umyalo wokukopisha ezimweni eziningi.
- ihlanganiswe ne-xcode yakamuva
- I-copypaste isebenza ngo-100% ku-mac 10.14
- Ishintshe ezinye izingxoxo zisebenza kangcono kumodi emnyama.
uma unanoma imuphi umbuzo xhumana nathi ngqo.
Abasebenzisi beCopyPaste, siyayijabulela impendulo yakho. Manje isikhathi! Uma uneziphakamiso, izingqinamba noma izinguquko kumanuwali, sicela wenze uhlu bese uzithumela. Asikwazi ukwenza konke kodwa sizozama ukwenza izinto ezizuzisa abasebenzisi abangama-90%.
- [esilungisiwe] isikrini se-splash silenga ekuqaleni
- [kulungisiwe] kusebenza manje ukwengeza i-copypaste kuphepha nobumfihlo: iphaneli yokufinyeleleka. umsebenzisi usadinga ukunika ukufinyelela.
- [fixed] ukuhlanganisa inkinga yekhodi endala elungisiwe.
- manje i-mac os 10.14 mojave ingeza i-copypaste ngokuzenzakalela kuphepha nobumfihlo: iphaneli yokufinyeleleka ukuze abasebenzisi banikeze imvume ye-copypaste yokusebenzisa ibhodi yokunameka. abasebenzisi basadinga ukuvula lelo phaneli bese babheka ukuthayipha kokukopisha ukuze banikeze imvume.
sicela wenze ukufaka ngesandla kwale nguqulo. susa inguqulo onayo bese uyilanda bese uyifaka lena kufolda yakho yohlelo lokusebenza.
- hlola izibuyekezo manje ezilungiselelwe ukusetshenziswa ngokuzayo.
- mfushane i-url yaphuka manje isilungisiwe.
- i-darkmode manje iyasebenza
- izibuyekezo eziningi ezizayo ...
- Izinguquko eziningi nomsebenzi omningi wokuletha i-copypaste kusesikhathini nezinguquko zakamuva ze-mac os kanye nezinguquko zokuphepha kwe-apula nokusayina. ngiyabonga ngokubekezelela wonke umuntu. uma uthola noma iyiphi inkinga sicela usazise.
- yebo, le nguqulo isebenza ku-Mac OS 10.6 - 10.12
- Izinguquko zangaphakathi ekwamukeleni izinhlobo zedatha.
- Ukulungiswa kokunamathisela ukubuya okwengeziwe ku-Apple Numbers, Keynote nakuMakhasi.
- Ithuluzi elisha le- "Word Count and Frequency".
- Hudula bese uphonsa phakathi kwamaphalethi alungisiwe.
- Iziqeshana zokugcina umlando zigcinwa ngokushesha ukuvimbela ukulahleka kwedatha ekuphahlazekeni.
- I-CopyPaste manje isayiniwe. Yebo, ekugcineni! Ama-apula obambiso lwakamuva bekuyibhere ukuthola kodwa manje selwenziwe. Lokho kusho ukuthi ngeke isavula okokuqala ithi "Ingabe uyafuna ukuvula lolu hlelo lokusebenza ngonjiniyela ongaziwa". Manje sizobuyela ekusebenzeni kuzibuyekezo nokwenza ngcono i-CopyPaste. Siyabonga ngokubekezela kwawo wonke umuntu.
- Kuhlanganiswe futhi kwalungiswa nge-Xcode 5 yakamuva
- manje ikhodi isayiniwe.
- Ubhontshisi awusavuselelwa ngumlobi wawo ngakho-ke sayisusa sayifaka esikhundleni sisebenzisa i-TextEdit
- kuvuselelwe enguqulweni entsha ye-xcode.
[Ukulungisa] kulungiswe isiphazamisi esisebenza ne-ms word kwezinye izimo.
[Okusha] kuhlelwe u-10.8
[Okulandelayo] kuzongeniswa enguqulweni elandelayo. ngo-10.8 setha ukuphepha nobumfihlo: okujwayelekile ukuvumela izinhlelo zokusebenza ezilandwe kusuka noma yikuphi.
[Mod] Intel kuphela
[Mod] Shintsha ukuthi uhlelo lokusebenza luhlola kangaki izibuyekezo. Sicela ulande le nguqulo bese uyisebenzisa noma ngabe inguquko elula nje izosiza isiphakeli sethu ukubhekana nezibuyekezo kangcono.
[Okusha] Isithonjana esisha
Isikrini esisha esisha
[Mod] Uma uchofoza ku-Palette engenalutho, manje iwindi ledilowa liyavula futhi livumele ukukhetha i-Archive ehlukile.
[Kubuyekezwe] Kuhlanganiswe ne-xcode yakamuva. Ukuthuthuka okuningi nokwenza ngcono. Izinguquko kumanuwali.
[Okusha] Izinkinobho ezintsha ezimbalwa kokuncamelayo okukhombisa ku-Finder izintandokazi namanye amafayela asetshenziswa yi-Copypaste.
[Kubuyekezwe] Kufaka inguqulo yakamuva ye-Bean (iprosesa yegama ku-Copypaste). Ngenxa yomdali kaJames Hoover Bean.
[Mod] Manje seyi-Universal 32/64 Intel ne-PPC 10.5 nangaphezulu
[Okusha] Inketho entsha yokuncamelayo yokuvula umsindo wempendulo yamakhophi wekhibhodi
[Mod] Iziqeshana ezivela kwi-Microsoft Word manje sezihluliwe ukususa i-OLE nolunye ulwazi lwe-Link.
[Mod] Ukuboniswa kokuvulwa kwamaphalethi lapho usebenzisa i-command-ctrl-option-v (noma c) akubonisi izinkinobho zikadoti ekuqaleni obekuphazamisa
[Mod] iBean yakamuva ifakiwe i-beta 2.9.6 beta.
[Faka] manje ngokuphelele ama-64 bit
[Mod] manje ngo-10.5 nangaphezulu. le nguqulo ayisebenzi ku-tiger Mac OS 10.4. I-copypaste 3.0 inguqulo yokugcina ye-10.4.
[Mod] kuthuthukiswe okwenziwa kwasendaweni kwesiFulentshi
[Engeza] Esinye isibuyekezo esikhulu sabanikazi be-CopyPaste Pro MAHHALA.
[Engeza] Ifomethi yesiqeshana esisha.
[Engeza] Isici sokucinga seziqeshana zomlando nezinqolobane zomlando. Thola noma yini kunoma yisiphi isiqeshana.
[Engeza] Isici se-Clip Revolver. Lesi sici besikhona kunguqulo endala kakhulu ye-CopyPaste. Abasebenzisi bayicelile ngakho saphinda sayisebenzisa futhi. Nakhu ukuthi kusebenza kanjani: vula i-Clip Revolver kokuncanyelwayo bese u-command-option-v pastes futhi uthulule ibhodi lokunameka lokugcina. Lokhu kungasethwa kokuncamelayo.
[Engeza] Ikhophi yesiqeshana sokugcina esisetshenzisiwe esikopishiwe noma esinamathiselwe singaba phezulu kwesitaki Somlando, ukuze ukwazi ukunamathisela kaninginingi. Lokhu kungasethwa kokuncamelayo.
[Mod] Idrowa lokubuka kuqala linemenyu yenkinobho entsha ekhombisa zonke izinhlobo zedatha ezahlukahlukene kubhodi yokunameka. Uma ukhetha noma yiluphi uhlobo lwedatha, idatha yalolu hlobo isetshenziselwa ukudala isiqeshana esisha ngaphezulu komlando. Kunikezwe imininingwane kuphela.
[Lungisa] Ukukhishwa okuthuthukisiwe kwamakheli e-imeyili eziqeshini.
[Ukulungisa] kulungisa isiphazamisi ekugcineni iziqeshana zomlando kusigcini esidale ukuthi i-cp ishayeke.
[Mod] manje kungenzeka ususe isiqeshana esisodwa kwimenyu enkulu ngokubamba ukhiye wokulawula ngenkathi ukhetha isiqeshana kwimenyu yokunamathisela. ukususa kusetshenziselwa zombili iziqeshana zomlando nezingobo yomlando.
[Lungisa] selokhu kwaguqulwa u-2.3 kuya kusakhiwo esisha semininingwane yangaphakathi kwaba nenkinga ngokuhudula nokudonsa kanye nokunikezwa kwamahhotela. zombili manje sezilungisiwe.
[Lungisa] le nguqulo ilungisa isiphazamisi ngo-2.3 lapho ikhophi ku-Archive ivikele umsebenzi ojwayelekile webhodi lokunameka.
[Mod] ifomethi entsha ebhalwe kabusha yedatha ezoba yisisekelo sezici kuzinguqulo ezizayo.
[Mod] izosebenza kangcono kulabo abaku-Mac OS 10.4
[Lungisa] umhleli akasavuli ngengozi ngokuchofoza kabili kunoma iziphi izithonjana kuma-Clip Palettes.
[Ukulungisa] kulungisa inkinga yesithonjana eyenzekile lapho kushintshwa ukucushwa kwesikrini.
[Lungisa] ukulungiswa kwamaphutha amancane
[Mod] izixhumanisi eziya kunguqulo entsha yemanuwali.
[Lungisa] le nguqulo ilungisa ezinye izinkinga ngokuhlela iziqeshana ze-Archive.
okuningi kuyeza maduze ....
[Engeza] Le nguqulo inenketho entsha yokuncamelayo yokulungisa usayizi wefonti weziqeshana kuma-palettes. Okuzenzakalelayo kuyiphuzu eli-11. Ububanzi obuvumelekile manje busuka kumaphoyinti ayi-9 kuye kwangama-24. Ungavula okuncamelayo futhi uma iphalethi ibonakala, ungabona ngokushesha umphumela lapho uqinisekisa usayizi omusha ngethebhu noma ubuya.
[Mod] ungeze inguqulo yakamuva ye-Bean (i-processor yamagama ku-copypaste) elungisa ezinye izingqinamba uBean abenazo nge-mac os 10.6. Ngenxa yezinguquko ezenziwe ngumbhali kabhontshisi kuzoba lula ukuba ne-copypaste yakamuva usebenzisa inguqulo yakamuva ye-Bean.
[Engeza] ivumela ukuqamba kabusha iziqeshana. Ephalethini ungachofoza isiqeshana ukuvula idrowa ngokubuka kuqala bese ushintsha igama lalo endaweni yombhalo.
[Lungisa] kulungiswe isibuyekezo esikhazimulayo.
[Lungisa] inkinga, ukuthi i-CopyPaste ihlala ethekwini kungakhathalekile izilungiselelo zokuncamelayo.
[Mod] wengeze ukuhumusha kwesi-Japanese
[Okusha] inketho yokuncanyelwayo engeziwe yokunika amandla / ukukhubaza izithonjana ezintantayo ngokuhlukile kungobo yomlando nomlando.
[Lungisa] uxazulule inkinga ngokunamathisela okungalungile (sibonga uMichael G ngamakhanda kulokhu).
Ukuvuselelwa okuzenzakalelayo kokucwebezela kungenzeka kungasebenzi ngakho-ke sicela ulande bese ufaka ngesandla ngalesi sikhathi.
izinguquko eziningi ziyeza maduze ....
[Mod] Ikhodi engu-64/32 bit
[Mod] Kuhlanganiswe nomhlanganisi omusha
[Lungisa] Inkinga yengwe nge-Eudora elungisiwe.
[Lungisa] Okunye ukulungiswa kwamaphutha.
[Mod] ivuselelwe i-Snow Leopard Mac OS 10.6 manje eyi-64 bit
[Lungisa] ihluzo kusiphequluli sesiqeshana.
[Lungisa] ezinye izingqinamba ezitholwe ngumhlanganisi omusha.
[Mod] inguqulo ebuyekeziwe ye-processor eyakhelwe ngaphakathi (clip) processor Bean 2.3
[Engeza] ungafaka intambo ehlukanisayo ye- "Namathisela zonke iziqeshana kumlando / kungobo yomlando"
[Ngeza] i-d noma i- ^ t macro isetshenziselwa ukufaka usuku noma isikhathi entanjeni ehlukanisayo.
[Lungisa] imenyu yokuhlela e-Flash ingenzeka ngaphansi kwezimo ezixakile. Manje sekulungisiwe
[Lungisa] ukuhudula bese uphonsa ngaphansi koCocoa kudinga ukuthi uhlobo ngalunye lwedatha olubhalisiwe ngokuhlukile lubhaliswe nohlelo. Ezinye izinhlobo zemidwebo azisebenzelanga ukudonsa nokuphonsa kuma-palettes we-Archive nama-History ngoba abengabhalisiwe. Manje (ngale nguqulo) kunezinhlobo ezingaphezu kwe-100 zedatha ezahlukahlukene ezibhaliselwe ukuhudula nokudonsa.
[Engeza] Ithuluzi le-URL Shortener linemenyu kokuncamelayo (Okuvamile) ongakhetha kukho kumasevisi e-inthanethi e-5 ahlukahlukene ongawasebenzisela ukunciphisa ama-URL.
[Okusha] fushanisa ama-URL kumenyu yamathuluzi Ukuxhumeka kwe-inthanethi kuyadingeka. Kunezinsizakalo eziningi ezitholakalayo ezifushanisa ama-URL. Sisebenzise i-http: //is.gd. Singasebenzisa abanye. Kuzame usazise ukuthi ucabangani. Khetha i-URL ende njengaleyo yamavidiyo we-YouTube, shaya ithuluzi le-URL elifushane lokulenza libe ngaphansi kwezinhlamvu ezingama-20. Ikheli "https://plumamazing.com/product/copypaste" lifinyelelwe ku- "http://is.gd/qspE". Lolu hlobo lwezinto lusiza kakhulu ku-Twitter. Ukusetshenziswa okuningi kusencwadini.
[Lungisa] izinambuzane ezincane nezinguquko zezimonyo.
[Mod] Ubhontshisi onendawo yesiDanish ungeziwe
[Entsha] Ithuluzi Lokuvula Elivulekile
Ithuluzi ledethi lamaSulumane
[Mod] ezinye izintandokazi ezingeziwe.
[Mod] uncamela ukuzivumelanisa nokunamathisela isiqeshana ngokuchofoza kabili esikhundleni sokuyivula kusihleli.
[Mod] i-pref yokuvala i-Clip Browser ku-hotkey. I-Clip Browser lapho itholakala kuphela nge-command-mouse-screen-edge.
Ukucisha i-hotkey yesiphequluli se-Clip kunikeza izinzuzo ezimbili:
1. Unganamathisela kaninginingi isiqeshana esikhulu njalo ngaphandle kokukhipha ukhiye womyalo
2. Umyalo olula-v unamathisela isiqeshana sokuqala emlandweni ngenkathi umyalo-vv unamathisela isiqeshana sokugcina esisetshenzisiwe. (Zama, unamathisele umyalo-v-2 bese u-command-vv ozonamathisela isiqeshana # 2 kusuka kungobo yomlando futhi. Mane u-command-v bese udedela isiqeshana sokuqala emlandweni.)
[Mod] ibhukwana libuyekeziwe
[Mod] Ukuhumusha kwesiDanish
[Okusha] kusebenzisa umsebenzi ukunamathisela zonke iziqeshana emlandweni noma kungobo yomlando ngokulandelana okuguqukayo.
[Mod] ihlola ukuthi ngabe iLaunchBar iyasebenza yini futhi incoma ukushintsha izilungiselelo zeLaunchBar ezingahambelani.
[Fix] ivumela ukunamathisela ekukhanyeni
Ukulungisa inkinga nge-ClipAppend akusebenzi ngokungaguquguquki.
[Lungisa] inkinga nge-Dreamweaver
[Lungisa] inkinga nge-iWeb
[Okusha] imenyu yamathuluzi wokubuka wokubuka kuqala ifaka into yemenyu yokulandelana yamasevisi wohlelo lokusebenza engasetshenziswa kubhodi yokunameka ekhethiwe. Lokhu kukhulisa kakhulu inani lamathuluzi we-clip ukwenza kudatha yesiqeshana.
[Mod] isikhumbuzi se-LaunchBar manje asiveli kuzinguqulo ezindala ze-LaunchBar ebezingahambelani.
[Lungisa] ukukhishwa ku-PowerPC nge-Tiger (10.4) okwethulwe ngoshintsho lwakamuva lokuhambisana kwe-dreamweaver.
[Engeza] Ama-Palettes Wesiqeshana (Umlando Nezinqolobane Ezigciniwe) kungeziwe.
[Engeza] hudula bese uphonsa i-Clip Palette
[Mod] ibhokisi lokubhalisa manje lisusa noma iziphi izikhala ezimhlophe nezinhlamvu ezintsha kulokho okufakiwe noma okuthayiphiwe, ngaleyo ndlela kuncishiswe noma yimaphi amaphutha wokubhalisa komsebenzisi
[Mod] izinguquko eziningi kokuthandwa yi-CopyPaste Pro.
[Mod] ushintshe okunye kokuzenzakalelayo.
[Mod] isibuyekezo esikhulu sencwajana.
[Mod] le nguqulo yenza ukuhlola okuningi lapho kulondolozwa iziqeshana.
[Mod] izinguquko eziningi ze-UI.
Kuhunyushelwe [okusha] IsiDanish, isiJapane nesiJalimane.
[Mod] ngokwezifiso eziningi zomsebenzisi ziyatholakala.
[Mod] inguqulo entsha yeBean esetshenzisiwe.
[Mod] inguqulo engcono kakhulu ye-CopyPaste.
[Mod] ubuyekeze izinsiza zaseJapan
[Mod] idrowa lokubuka kuqala liyavalwa lapho uqala ukuhlela isiqeshana
[Mod] ushintshe isihleli sesiqeshana ukuze singabonisi iwindi elingenasihloko elingadingekile.
[Mod] Ubhontshisi unezinsiza zaseJalimane
[Engeza] Iziqeshana zombhalo zingangezelwa nge-hotkey command-option-c. Lokhu kungavalwa kuzintandokazi.
[Mod] Isigaba "Esijwayelekile" sezintandokazi manje sehlukaniswe izigaba ezimbili "Uhlelo" kanye "Nokujwayelekile" ukuthola isikhala esithe xaxa.
[Lungisa] ukuphahlazeka kuTiger (OS 10.4)
[Lungisa] ukuphahlazeka emsebenzini Namathisela zonke iziqeshana kusuka ku-History / Archive
[Lungisa] inkinga yokuthi ikhophi ku-dreamweaver ayikwazanga ukunamathiselwa
Uma ungakaze usebenzise i-copypaste pro ngakho-ke kubalulekile ukubheka imanuwali elapha:
[Lungisa] ukulungiswa kwamaphutha okumbalwa
[Mod] ubhontshisi omusha oqukethe neziphazamisi futhi.
[Mod] ushintshe ukuhleleka kokulayisha lapho i-CopyPaste yethula, ukuze isithonjana sebha yemenyu size ekugcineni.
[Lungisa] Ukubambeka kumshini wokukhipha i-imeyili uma uwubiza ezithombeni kulungisiwe.
Esiqeshini esizayo ukubuya kwamaphalethi amile mpo.
[Lungisa] le nguqulo yethula uBhontshisi kanye kuphela enguqulweni ngayinye entsha. Kufanele kube nokwethulwa okukodwa ukwazisa i-OS ngobukhona beBean njengomhlinzeki wesevisi.
[Fix] Isikhiphi se-imeyili nomsebenzi wokukhipha i-url ngokungaguquguquki kuzo zonke izimo.
[Okusha] Usayizi wombhalo wesiqeshana esikwi-Clip Browser manje usungakhula usuke ku-50% uye ku-200% (bheka Ithebhu yokugqwayiza yezintandokazi)
Ukwenziwa okwasendaweni okusha kwe-Danish kungeziwe
[Lungisa] Izinkinga ezimbalwa nge-KeyCue zixazululwe ngokubambisana nomlobi we-KeyCue.
Lungisa] Isihleli sebhontshisi manje kufanele sivule njalo futhi sihlele okukhethiwe neziqeshana
[Mod] Manje, Uma ususa zonke iziqeshana ku-Archive noma kumlando bese uqala kabusha iziqeshana zesampula aziphinde zivele. Zivele kuphela uma isakhiwo sefolda se-Archives noma Umlando singasekho, okungenzeka kuphela uma usisusa ngesandla.
[Mod] Uma "ugcina zonke iziqeshana Emlandweni" inqubo ayimane ime ngemuva kweziqeshana ezingama-43 (inani eliphakeme le-Archive) kepha kunalokho kufakwa i-Archive entsha enezinombolo zokwengeza ukugcina inqwaba yeziqeshana.
[Mod] Ngokungeziwe ekusebenzeni kwe- "Khiya lesi siqeshana" kumenyu yokuqukethwe kusiqeshana se-Archive ungakhiya noma uvule zonke iziqeshana ku-Archive ngomsebenzi we- "Lock All Clips" kumenyu yokuqukethwe kusuka ngemuva kwe-Clip Browser.
[Lungisa] Ukuphahlazeka okulungisiwe ku-PPC / Intel kusuka kumenyu yokuqukethwe
[Lungisa] I-clip clip yokukhiya ilungisiwe
[Lungisa] Ukuqamba kabusha i-bug Archives kulungisiwe
Ukwenza okusha [okusha] kweSpain kuyasetshenziswa kepha okwamanje kuxhumene nencwajana yesiNgisi.
[Fix] ukuphahlazeka okubangelwa i-plugin yemenyu yokuqukethwe ku-Safari nakuMeyili
[Fix] ukuphahlazeka lapho i-Clip Browser iphendulwa ku-Clip Archive futhi kwenziwa ikhophi ejwayelekile (bekuyisiphazamisi esisha ngo-1.0.2)
[Lungisa] isici sebhodi yokunameka yokukhiya manje sisebenza kahle.
[Lungisa] imenyu yohlelo lokusebenza ebonakala kuphela uma inketho yokuncamelayo ukukhombisa isithonjana se-Dock nemenyu ihlolwe isebenza.
[Okusha] okwenziwe kwasendaweni kwaseFrance nemanuwali kungeziwe
[Okusha] kwesiFulentshi, isiJalimane, iSpanishi, isiDanishi kwengezwe ku-Bean.
[Okusha] Umlando wesiqeshana unomyalo omusha wemenyu wokuqukethwe wokubuyisela ukuhleleka kweziqeshana Emlandweni
[Okusha] Imenyu ye-CopyPaste inomyalo omusha kumenyu ye-Clip History yokubuyisela ukuhleleka kweziqeshana emlandweni
[Okusha] Iziqeshana ku-Clip Archive (hhayi Emlandweni!) Zinikela ngomyalo othi "khiya isiqeshana" ukuvikela isiqeshana ekususweni noma esikhundleni saso. Isiqeshana esikhiyiwe sinikeza umyalo "wokuvula isiqeshana".
[Okusha] Okuncamelayo kunenketho entsha yokusetha umyalo wokhiye wokubonisa i-Clip Browser ku-doube V. Uma lokhu kuhlolwe ungashaya umyalo ophindwe kabili-V ukuthola i-Clip Browser ngesiqeshana sokuqala esikhethiwe (ngaphandle kokulibala). Uma ungahloli umyalo olula v ukhombisa isiphequluli (ngemuva kokubambezeleka), bese u-V wesibili ekhetha isiqeshana sesibili.
[Okusha] Ukukhethwa kwesiqeshana esilandelayo ne-v ephindaphindwayo manje kuyasebenza noma ngabe Isiphequluli sisalokhu "silenga" ekubambezelekeni kokuphela. Ngaphambi kwale nguqulo i-v yesibili ihlolwe kuphela lapho isiphequluli besivele sibonakala.
[Fix] Ukuhambisana kwe-KeyCue, iwindi le-KeyCue HUD alibonisanga lapho i-CopyPaste ikhombisa i-Clip Browser. Kulungisiwe kepha kudinga ukuvuselelwa ukuze.
[Lungisa] Imenyu yokuqukethwe izinto zokugcina kumathuluzi wokuqhafaza manje ziyasebenza, azizange zenze ngenxa yephutha lohlelo oludabukisayo.
[Lungisa] Inkinga kolunye uhlelo ngokukhethekile i-Excel ekopisha amaseli kabili ilungisiwe
[Lungisa] Inkinga yokuthi ngemuva kwekhophi engaphumelelanga ngekhibhodi, ikhophi elilandelayo alizange lingene kumlando wesiqeshana.
[Mod] Ungaphunyuka Esipheqululini esibizwa ngekhibhodi ngaphandle kokunamathisela uma uthayipha ukhiye c. Lokhu futhi kuqala ukuvula isiphequluli, kepha uma ukhipha zonke izinkinobho ukuphenduka kuyaphazamiseka nokunamathisela futhi. asikwazi ukusebenzisa ukhiye we-esc kulokhu, ngoba kubiza i-Front Row. Zonke ezinye izinkinobho zisetshenziswa njengama-hotkey we-Archive noma azisebenzi. Ngakho-ke zama ukhiye c ukukhipha ukunamathisela.
[Mod] ngesicelo usuku lokuthengwa kwe- $ 20 seluliwe kuze kube ngumhla ka-31st ukuze kuvunyelwe abasebenzisi inyanga egcwele yokuhlolwa. ukuqala ngoJuni kukhuphukela ku- $ 30.
[Engeza] imenyu yokuqukethwe manje ingafakwa futhi isuswe ewindini lezintandokazi.
[Faka] vula isiphequluli ngokhiye wokukhetha usenza sihlale sivuliwe (sinamathele).
[Engeza] ukuphenya isiphequluli ngokhiye wokukhetha kusenza sihlale sivuliwe (sinamathele).
[Mod] kabhontshisi (isihleli sesiqeshana) sibuyekezelwe enguqulweni engu-1.2.
[Mod] izibuyekezo zokuhlola ibhokisi lokuhlola kuma-prefs. ivulwa ngokuzenzakalela. ukucwebezela bese kuhlolwa kanye ngesonto ngemuva.
[Mod] inani eliphansi leziqeshana lingu-2 ngomlando omfishane impela.
[Mod] ingxoxo manje ivela ngemuva kwezinsuku ezingama-30 ikhumbuza umsebenzisi ukuthi athenge lapho evala shaqa.
[Mod] indawo yesiphequluli ikhunjulwe ukuqala kabusha.
[Lungisa] izilungiselelo zokungena ngemvume manje ziboniswa kahle maqondana nohlobo olusebenzayo lwe-copypaste ngakho-ke uma uqalisa ukukopisha unakekelwa kwenye indawo, kuzokhombisa ukusethwa kokungena ngemvume kungamakiwe.
[Lungisa] ukungavumelani ne-popchar kanye ne-typinator kulungisiwe.
[Lungisa] amamenyu anyamalalayo lapho umuntu ehlanya ngempela ebeka inani leziqeshana ku-zero lilungisiwe
[Lungisa] ukufaka kungobo yomlando isiqeshana bese usetha ukhiye omusha oshisayo wesiqeshana ongasamisi i-copypaste
[Lungisa] "Ukukhetha okuVulekile kusihleli" kuvulwa njalo amakhophi alandelanayo ngemenyu kuMhleli ngenxa yefulegi elingazange lisethwe kabusha.
Kukhishwe inguqulo yokuqala yomphakathi engu-1.0. uma ungakaze usebenzise i-copypaste pro ngakho-ke kubalulekile ukubheka imanuwali elapha:
[Faka] into ekhethwayo entsha ukukhubaza i-flip ne-genie animation kuthebhu yokugqwayiza. umqondo omuhle kuma-macs ahamba kancane.
[Faka] into entsha oyithandayo lapho uma ugcina zonke izinto ezihudulwayo bese uphonsa namanye amakhophi emlandweni. lesi yisici esiyingqayizivele se-copypaste. chofoza bese uhudula noma yisiphi isithombe ngaphandle kwe-safari bese uhlola umlando wesiqeshana ukuze usibone sisebenza.
[Faka] okokuqala ngqa abasebenzisi manje sekuneziqeshana eziyindida emlandweni nasengobo yomlando. lezi zisetshenziswa njengezibonelo lapho umsebenzisi eqala ukusebenzisa i-copypaste pro.
[Mod] ushintshe imenyu yezintandokazi ezisheshayo eyehla phansi kusuka kusithonjana esintantayo ngokuchofoza kwemenyu yokuqukethwe noma lapho ugcina igundane licindezelwe kuyo (ungadonseli, lokhu kumisa imenyu!)
[Mod] kukhona ukubambezeleka ngomzuzwana we-1/3 owethulwe ekuziphatheni kwesiphequluli lapho kuvulwa kusithonjana esivumela ukudlula ngokushesha ngewindi ngaphandle kokuyivala. futhi evumela ukuyihudula ngaphandle kokuyivala lapho uhambisa igundane ngaphandle kwewindi lesiphequluli ngaphakathi kwesekhondi elingu-1/3.
[Isiphazamisi] kulondolozwa iziqeshana ezibangele imiphumela engalindelekile lapho kususwa iziqeshana ezingashadile.
[I-Bug] ukuhudula isiphazamisi sesiphequluli kulungiswa.
- i-plugin entsha yemenyu yokuqukethwe evumela ukuthi igundane liqhubeke nomyalo wemenyu othi "Kopisha ukuze ufake kungobo yomlando ..." ukuze ukopishele endaweni elandelayo yamahhala ku-Archive yamanje.
- umyalo omusha wokhiye, okusho umyalo + ophindwe kabili c (c bese u-c futhi) okuvumela ukukopisha ngqo kwisikhala samahhala esilandelayo ku-Archive yamanje
- imenyu eyehla phansi kusuka kusithonjana ezintantayo ikhombisa okunye okuncamelayo ongakusetha ngokushesha lapha kunokuvela kufasitela lezintandokazi.
- imithombo kabhontshisi yakamuva iguqulelwe izidingo ze-CopyPaste kanti iBean entsha isesixukwini. Kujwayelekile njengokujwayelekile ukususa zonke ezinye izinhlobo ze-Bean, kufaka phakathi lezo ezinenguqulo ezindala ze-CopyPaste (ungagcini izinhlobo zakudala ze-copypaste ezungeze), i-Finder engeke ikhombise kuyo emiphumeleni yokucinga. futhi ukuze isebenze ngokuphelele i-CopyPaste kufanele ifakwe kufolda yezicelo.
- lena isebenzisa inkinobho entsha "yephasiwedi elahlekile" kokuncamelayo,
- imenyu ye-CopyPaste kusuka kusithonjana ezintantayo manje isebenza kahle
- umyalo we-Make Sticky kusuka kumenyu yokuqukethwe ngemuva kokusebenza kwesiphequluli
- ukubambezeleka kwe-Quick Copy kuyashintsha (umbono kaPeter akuwona owepeter)
- Ukulungiswa kwamaphutha
- manje ingavula isiphequluli isebenzisa isithonjana sebhodi lokunameka elincane.
- ngokuchofoza kusithonjana sebhodi lokunamathisela elincane manje kuphendula isiphequluli.
- chofoza bese ubamba (noma ctrl-click) kusithonjana sebhodi lokunameka elincane kukhombisa imenyu yokukopisha
konke lokhu kusebenza konke uma isithonjana sebhodi lokunameka elincane sikhombisa futhi lokho kulawulwa kokuncamelayo.
- umsebenzi wekhophi osheshayo (kusuka kupopypaste yakudala) manje usungavunyelwa kokuncamelayo. khetha okuthile bese ubamba inkinobho yegundane umzuzwana owodwa bese iyakopisha. chofoza kwenye indawo bese ubamba inkinobho umzuzwana owodwa bese unamathisela.
- inkinobho entsha kokuncamelayo ivumela ukungenisa ama-clipets kusuka ku-copypaste-x (qaphela ukuthi uma unezinqolobane ze-copypaste-pro ezikhona ezinegama elifanayo, lo myalo uzothatha isikhundla seziqeshana ezikulezi zinqolobane.) qiniseka ukwenza isipele noma iyiphi i-copypaste yakudala izingobo zomlando ngaphambi kokusebenzisa lokhu.
- isithonjana sebhodi lokunameka ezintantayo (uma sikhona kokuncamelayo) sizifihla ngobuhlakani uma isidlali se-dvd, i-vlc, i-eyetv siphambili.
- okuncamelayo manje kugcina abasebenzisi i-imeyili nephasiwedi bese kubaqhathanisa ngesikhathi sokuqalisa. lokhu kwenza kudingekile ukufaka imininingwane yokubhalisa futhi. exterminator @ umsebenzi usasebenza kepha uzophelelwa yisikhathi kungekudala.
- imenyu entsha yokuqukethwe evikela ukuphahlazeka lapho i-copypaste ingasebenzi. lokhu kuzifaka ngokuzenzakalela, kepha kufanele uyeke iposi ne-safari bese uqala kabusha. isizathu ukuthi uhlelo luhlala lenza ikhophi yawo wonke ama-plugins emenyu yokuqukethwe kwimemori yohlelo ngalunye olusebenzayo. ngakho-ke noma ngabe ufaka i-plugin entsha yemenyu yokuqukethwe, endala isetshenziswa inqobo nje uma ungaqali kabusha lonke uhlelo. leso yisona sizathu esenza ukuthi kwesinye isikhathi uqale kabusha yonke ikhompyutha.
- okunye ukulungiswa kwamaphutha.
- Ungakopisha ngqo kungobo yomlando kusuka kumenyu ye-menubar. Gqamisa umbhalo othile bese ukhetha indawo ekhona, isiqeshana siya lapho. Uma uyekela ku "Kopisha ku-Archive: .." into yemenyu yomzali, ungeza isiqeshana ngenkinobho elandelayo yamahhala ku-Archive. Ukusetha i-hotkey ehlukile yaleyo ngobo yomlando kufanele usebenzise umyalo wekhibhodi-c- # noma kamuva ungashintsha noma iyiphi i-hotkey enikezwe kusuka ku-Clip Browser.
- Uma wenza kusebenze i- "show browser on command mouse at screen edge" uthola isiphequluli ngokubuka okugciniwe kusuka ohlangothini KWESOKUDLA futhi ohlangothini KWESOKUNXELE uthola isiphequluli ekubukweni komlando. indlela esheshayo yokubuka iziqeshana. Umyalo-c wokubuya kusuka kungobo yomlando uye emlandweni futhi okuphambene nalokho usasebenza
- Ukuphawula nge-imeyili manje kweqa umugqa ngemuva kwezinhlamvu ezingama-80 (ngaphansi uma umngcele wegama kamuva)
- Ungahlela isiqeshana ngasinye ngokubamba ukhiye womyalo bese uya kumenyu yezinto zomlando bese ukhetha. Ukwenza lokho kuzovula isiqeshana ku-Bean Lokhu futhi kuyasebenza kumenyu yokuqukethwe.
- Ungaguqula izilungiselelo zokuncamelayo ukuze uzinamathisele ngaphandle kwezitayela endizeni ngokucindezela ukhiye wokukhetha bese ukhetha ukunamathisela kumenyu. Lokho kusho ukuthi uma uvame ukunamathisela umbhalo ngezitayela bese ucindezela ukhiye wokukhetha, unamathisela umbhalo ocacile ngaphandle kwezitayela.
Lokhu kusebenza kwimenyu engokomongo futhi.
- Ukuphawula okukodwa kukhombise ukuthi unxantathu omncane kunzima ukukushaya esipheqululini. Akudingekile ukushaya unxantathu uma usebenzisa inkinobho yegundane elungile, (noma ngokuchofoza kweminwe emibili on-trackpad). Unxantathu ukhona kulabo abangazi ukuthi bangayithola kanjani imenyu ngokuchofoza kwesokudla kwegundane.
- Ithuluzi elilodwa elisha "Vula ukukhetha kusihleli"
- Ithuluzi elilodwa elisha "Thumela ukukhetha eMeyili"
- Ithuluzi elilodwa elisha "Vula ukukhetha njenge-URL"
- Isifaki semenyu yokuqukethwe manje sisusa i-plugin endala ye-CopyPaste-X kanye ne-plugin eyedlule.
- Qiniseka ukufaka i-plugin entsha yemenyu yokuqukethwe. I-plugin yemenyu yokuqukethwe iyabuyekezwa futhi futhi kufanele ithathelwe indawo ukuze ihambisane nezinguquko ezingenhla.
- ubhontshisi (umhleli wesiqeshana) wakhelwe ngaphakathi. vula ngesiphequluli sesiqeshana.
1. Izinhlobo ezindala ze-Bean ne-CopyPastePro kufanele zisuswe kufolda yezicelo
2. I-CopyPaste kufanele ikopishelwe kufolda Yezicelo
3. Kufanele uqale kabusha uhlelo (noma ungene ngemvume ungene ngaphakathi) ukwazisa uhlelo lwe-Bean ngaphakathi kwe-CopyPaste.
- isiphequluli sesiqeshana sicishiwe ngokuzenzakalela futhi singavulwa kuzintandokazi.
- ukusheshisa kuyo yonke imisebenzi.
ayikabuyekezelwa le nguqulo entsha. kuzoba nje kuleli sonto ngemuva kokukhipha le beta. noma ngubani (noma yimuphi umhloli we-beta) othokozela ukusebenza kumanyuwali wamukelekile ukuthi angijoyine ekuyivuseleleni nasekuthuthukiseni.
enguqulweni yokugcina kube nokulibaziseka okuthile lapho usebenzisa izingobo zomlando zesiqeshana ngomyalo- # ukhiye-combo odale ukunamathisela iziqeshana ezingalungile. lokhu kufanele kulungiswe. izingobo zomlando zesiqeshana azisebenzi nhlobo ekubhaleni izikhala ezikhona. lokhu kulungisiwe
ubhontshisi (iprosesa yegama)
ubhontshisi manje uhlanganiswe ne-copypaste (inqwaba yohlelo lokusebenza), okuyinto enhle, kepha (okubalulekile) kufanele unakekele izinto ezintathu:
Izinhlobo ezindala zebhontshisi ne-copypastepro kufanele zisuswe kufolda yezicelo
3. kufanele uqale kabusha isistimu (noma ungene ngemvume ungene ngaphakathi) ukwazisa uhlelo lukabhontshisi ngaphakathi kopypaste.
uze wenze lezi zinto ezintathu, awunaso isici sokuhlela ibhodi yokunameka usebenzisa ubhontshisi owakhelwe ngaphakathi.
okuthandwayo kuhlanzwe kancane futhi okuzenzakalelayo kusethwe ukuthi kungadideki.
"ukwethulwa kokungena ngemvume" manje sekuyibhokisi lokuhlola futhi kumane kukhombisa ukulungiselelwa kwesistimu bese kusebenza kukho, okusho ukuthi uyabona ukuthi ngabe * uhlobo oluthile lwe-copypaste lubhaliselwe ukuqala lapho ungena ngemvume. uma ukhubaza bese unika amandla ibhokisi lokuhlola, ungaqiniseka ukuthi inguqulo yamanje ye-copypastepro ibhalisiwe ukuqala ukungena ngemvume. uma kamuva usebenzisa okuncamelayo kohlelo ukuze ungabhalisi i-copypastepro, ibhokisi lokuhlola lizokukhombisa lokho ngokufanele futhi ngeke lizame ukubhalisa kabusha i-copypastepro. lokho kwakungukungaziphathi kahle okukodwa ku-copypaste-x.
futhi kunesilungiselelo esisha sokuvula isiphequluli ku-command-mouse-move-to-screen-edge. lokhu kuvaliwe ngokuzenzakalela. isimilo sishintshile kancane, ukuze uqale ubambe ukhiye womyalo bese uhambisa igundane. bekuphazamisa impela ukuba negundane onqenqemeni lwesikrini bese uthola isiphequluli lapho ufuna ukusebenzisa ukhiye womyalo kweminye imisebenzi. isimilo manje kufanele senelise.
indlela yokuvuselela isishintshile ngaphambi kokuthi isebenze kepha ifake iwindi lesimo kwesinye isikhathi ebelingemuva kwamanye amawindi futhi lidinga ukukhishwa ngeshwa kushiye amamenyu we-copypaste wonke esempunga futhi abantu bezibuza ukuthi bangayishiya kanjani i-copypaste.
- inqubo entsha yokufinyelela isiphequluli esivundlile. bamba ukhiye womyalo bese uhambisa isikhombisi yonke indlela iye kwesokudla noma kwesobunxele kwewindi.
- ithuluzi elisha kumenyu yokuqukethwe yesiphequluli se-clip ukuthumela isiqeshana ngeposi.
- isuse isiphequluli esiqondile (sizobuya ngendlela ehlukile).
- hlola imenyu yokubuyekeza nekhodi elengeziwe (ayilungiselelwe ukusetshenzelwa okwamanje).
- Umhleli kabhontshisi ungezwe ukuhlela nokugcina iziqeshana zangemuva (umlando noma izingobo zomlando)
- bonisa iziqeshana esipheqululini njenge-RTF okusho ukuthi izitayela nemibala zifakiwe.
- Isiphequluli esivundlile manje sisebenza kangcono futhi sishesha ngeziqeshana ezingama-50 noma ngaphezulu emlandweni.
- ukubhaliswa kungeziwe.
- ezinye izinto eziningi ....
Uhlobo lwakamuva luhlala lutholakala esizeni noma lapha ku Thwebula. Sincoma ukusebenzisa inguqulo yakamuva.
Bona i-ChangeLog umahluko kuzinguqulo ezindala.
Inguqulo yokugcina yayingu-3.7.9. Thepha lapha ukuze uyilande. Isebenza kahle nge-Mac OS 10.13-12.0
Le nguqulo yakudala i-CopyPaste 3.7.4 isebenza neMac OS Sierra 10.12
Le nguqulo yakudala yaziwa ngokusebenza ne-TextExpander
Le nguqulo endala kakhulu ngeyokugcina ukusebenza neMac OS 10.4
Uma udinga inguqulo ethile ethile endala usazise futhi sizoyengeza lapha.
Nasi isixhumanisi sokulanda imanuwali ngefomethi ye-PDF noma ubuke imanuwali engezansi.
Ngifuna nje ukuzwakalisa ukubonga kwami ​​nge-CopyPaste Pro ebengilokhu ngiyisebenzisa kusukela ngonyaka engathola ngawo iMac yami yokuqala ngo-1988. Ezinye izinto ebengizithanda azisekho, njengePageMaker, kepha ezinye ezinjengeCopyPaste Pro, nePopChar, bezikhona mac enginakho. Lapho ngithola i-mac entsha ngiwafaka womabili ngokushesha. Angazi ukuthi abantu baphatha kanjani ngaphandle kwebhodi lokunamathisela elinememori. Ngakho nje ngiyabonga!
“Ngeke Usinde Ngaphandle Kwayo. NjengoMqondisi WeDeski Losizo leNational Association of Photoshop Professionals (NAPP), ngiphendula imibuzo engama-100 e-mail usuku ngalunye. Njengoba ungacabanga, amalungu amaningi e-NAPP ahlangabezana nezinkinga nemibuzo efanayo njalo. I-CopyPaste ingongela izinkulungwane zamagama wokuthayipha nsuku zonke, ingivumela ukuthi nginike izimpendulo ngochungechunge lwezinqamuleli ezilula zekhibhodi. Ngaphandle kwe-CopyPaste, isikhathi sami sokuphendula besizohamba kancane futhi kuzoba nethuba elikhulu kakhulu lokunganembi okungangena kwizimpendulo. ”
Pete Bauer Umqondisi we-NAPP Desk yosizo
“Kuhle! Bengilokhu ngisebenzisa i-CopyPaste kusukela maphakathi nawo-1990. Kusemqoka. I-Apple bekufanele ifake i-CP kwi-Mac OS. Ngiyabonga ngokwenza impilo ibe lula kancane. ”
“Kuhle kakhulu! inyawo lokugcina inkumbulo selincane futhi aliguquki. ngithola ukuthi lolu hlelo lokusebenza lwenza umsebenzi walo oyisisekelo wokukopisha nokunamathisela kahle (izinkinobho ezilula ezifushane) kunezinye izinhlelo zokusebenza ezincintisanayo. Kunconywa kakhulu.
fxt (ku versiontracker.com)
"Ngihlala ngikhokha imali yokuqala iMac entsha ngoba ngiwuthanda kakhulu lo mkhiqizo. Yisona sikhathi esonga isikhathi esikhulu kunazo zonke ongazicabanga lapho udinga ukusebenzisa izimpendulo ezijwayelekile kunoma iyiphi i-imeyili. Okuhle kunakho konke ukuthi kulula njengokubala. ”
“I-CopyPaste-X njengoba nje eyandulele iMacOS ingubuciko. Ngeke ukwazi ukucabanga ukuthi wenze kanjani ngaphandle kwayo. Futhi umsebenzi wokuhlela omusha nge-.pdf-support kanye nokusesha okungacacisi (ngisho nokuya kwimisindo efanayo) KUKHULU! ”
“Kusengcono kakhulu. Isetshenziswe okungenani izikhathi ezingama-20 ngosuku. Ukube endala ku-Mac 9.2, lena entsha inezici eziningi ezinhle kakhulu kumuntu obhala noma ohlela okuningi. Umkhiqizo wayo ophakeme kakhulu futhi kuyangijabulisa ukuba nawo. ”
“Uhlelo oluhle kakhulu. Le software eyodwa engingeke ngibe ngaphandle kwayo. Ngisisebenzise iminyaka eminingi futhi angikwazi ukucabanga ukuthi ngisebenza ngaphandle kwayo. Izikhathi ezimbalwa ngibe nombuzo uJulian asheshe waphendula. Akangazi, kodwa wangiphatha njengomndeni uma kungenjalo. Ngiyabonga ngohlelo oluhle kakhulu. ”
slb4010_dotmac ku- versiontracker.com
"Ngiyayiqalekisa i-Apple ngokungangivumeli ukukopisha izinto ezingaphezu kweyodwa ngesikhathi." Kepha makabongwe abahleli abanomusa. KuShareware.com, ngithole uhlelo lokusebenza olwandisa amakhono ami okukopisha kayishumi. Amathuluzi wokucubungula umbhalo weCopyPaste akuvumela ukuthi ushintshe ikesi, ithebhu, noma ufake amafayela wombhalo, izithombe, nemisindo ebhodini lokunamathisela - iphalethi elintantayo ligcina ithrekhi yokuthi ikuphi. Okucocekile kakhulu ingobo yomlando yesiqeshana, efaka izinto ezikopishiwe kufolda kudeskithophu yakho - elula kakhulu kubaphenyi be-inthanethi. ” - Okuningi…
UDebbie Elkind, Umagazini Onentambo
"Uzothola ukuthi i-CopyPaste incane ngokumangazayo futhi, njengezinsiza eziningi engizithandayo ze-shareware, inobuntu obunamahloni - ungayithumela futhi izobuya ngokuqonda ngasocingweni lwakho." - Okuningi…
UCathy Begien, Umagazini weMacworld
“Kulabo abenza noma yiluphi uhlobo lokubhala, iCopyPaste-X iyithuluzi eliyigugu okulula ukufundwa, futhi uma usuqala ukulisebenzisa, uzozibuza ukuthi wake wazwana kanjani ngaphandle kwalo. Amagundane angu-4.5 kwangu-5 ”- Okuningi…
UDanny Groveman, iMac Guild
"I-CopyPaste: I-Godsend Yabasebenzisi Bamandla nama-Novices ngokufanayo"
“Lolu wuhlelo oluncane olusebenzisekayo. Inikeza okuningi kumsebenzisi onolwazi, kepha kunezici zayo ezingasiza kakhulu kumfundamakhwela. ” - Okuningi…
UNancy Carroll Gravley,
“Okuwukuphela kosizo engihlale ngiyiqiniso kulo yi-CopyPaste ethandeka njalo evela kubantu abathandekayo eScript Software. ICopyPaste uma usushisiwe, ikunikeza amabhodi wokunameka ayi-100 onganamathisela kuwo izingcezu ezibalulekile nezicucu zemibhalo, ama-URL owadingayo nanoma yini nje ofuna ukuyigcina bese uyayisebenzisa futhi. ”
I-Vancouver Sun Article
“Is vous voulez gérer totalement vos presse-papiers (les sauvegarder, les éditer, les organizer par thème), CopyPaste is fait pour vous. De même, si vous voulez être aidé à la saisie, sa fonctionnalité yType peut vous aider. Et vu la densité de possibilités, les 30 $ demandés ne semblent pas exagérés. ” - Okuningi…
“Ngisebenzisa iCopyPaste Pro 2.0 (ebhalwe nguPeter Hoerster noJulian Miller) ngaso sonke isikhathi! Isoftware eyodwa ebaluleke kakhulu yokwengeza ku-Mac yami!
Izwi nje lokubonga ngokuthuthuka kwakamuva ku-CopyPaste: kungukuthuthuka okunamandla kokutholwa komzimba wangaphambilini. Ngempela ingenye yezingcezu ezinhle kakhulu zesoftware eyengeziwe etholakalayo. Kade ngiyisebenzisa iminyaka eminingi futhi bengizokuthola kunzima ukuphila ngaphandle kwayo. Manje sekungcono kakhulu! Izilokotho ezinhle.
Akuyona iMac ngaphandle kwayo!
UMichael Jay Warren
Siyabonga ngokuletha le nguqulo entsha ye-CopyPaste emakethe. Bengilokhu ngisebenzisa i-CopyPaste kusukela ngo-2002 (OS9), futhi ngisathembela kuyo nsuku zonke! Ngibonise ezinye izinhlelo zokusebenza zebhodi yokunameka, kepha i-CopyPaste iyona engcono kakhulu! UDave Wheelock
Angikucabangi ukusebenzisa iMacintosh ngaphandle kwalokhu - kubonakala kimi ukuthi ngiyi-injector ye-fuel enjini enhle.
ULeslie Benscoter, Deadwood, Oregon
Kubalulekile impela. Angikwazi ukubala inani lezikhathi ngosuku engisebenzisa ngazo i-Copypaste. Nonke niyazi ukuthi iMicrosoft futhi mhlawumbe nabakwa-Apple manje bazokopisha futhi banamathisele lo mbono kuma-OS abo futhi bangakukhokheli, akunjalo? Ngabe lokhu akwenzekanga kini izikhathi ezimbalwa ngaphambili?
[Impendulo elula yalokho inguyebo.]
Ngiyabonga futhi ngocezu olukhulu futhi olubalulekile lwesoftware! Ngicabanga ukuthi i-FANTASTIC!
Ngeke ngiphile ngaphandle kwayo !!! Umkhiqizo omuhle! Kuyinto engenakulinganiswa futhi ngiyabonga ngokuyithuthukisa!
Ekugcineni ngikhombisile iseva yakho ukuthi ingivumele ngikukhokhele. Ngiyabonga. ICopypaste ibilahlekile kakhulu selokhu ngathola i-Intel Mac esebenzisa i-Leopard. Kusemqoka!
Uqinisekile ukuthi uyikhombisa kanjani intombazane isikhathi esihle! [sikholwa ukuthi ubekhuluma nge-CopyPaste]
Bengiyithanda inguqulo yakudala yeCP, kepha kufanele ngivume, inguqulo entsha ingcono kakhulu. Angikaze ngicabange ukuthi ngingasho lokho! Siyabonga ngawo wonke umsebenzi wakho onzima. Ekuqaleni, ngangikhathazekile ngokwenza noma yiluphi ushintsho olwenziwe ku-CopyPaste. Manje ngijabule ngokwenzile futhi angifuni ukubuyela emuva!
I-CopyPaste Pro: uma usuyizamile, uyazibuza ukuthi ungaphila kanjani ngaphandle kwayo!
UProfesa uDkt. Gabriel Dorado, i-Molecular Biology ne-Bioinformatics
Umphathi weProjekthi / Umphathi Wezinhlelo Zekhompyutha
I-CopyPaste yakho ne-TypeIt4Me yizinhlelo ezimbili ezisetshenziswa kakhulu kwikhompyutha yami futhi basebenze ndawonye ngenjabulo iminyaka. Sicela wenze lokhu kwenzeke futhi, kungekudala. Uma wenza kanjalo, ngizoqamba ingane yami elandelayo ngegama lakho. Vele kungathatha isikhashana, ngoba ngizoba neminyaka engamashumi ayisikhombisa ngosuku lwami lokuzalwa oluzayo ngo-Okthoba. : ^ D
I-CopyPaste i-TERRIFIC. Kuyinto yokwengeza okujabulisayo ohlelweni lwami lwe-Mac. Zonke izici zamukelekile futhi zenze umsebenzi wami waba lula kakhulu. Qhubeka nomsebenzi oncomekayo. Ngizobheka okusha okusha. WS
Siyabonga ngolwazi lokuthuthukisa. I-CopyPaste ibalulekile! JF eMaine
Siyabonga ngokuthumela isiqinisekiso se-CopyPaste. Kuluhlelo lwe-shareware olubanda kunazo zonke kusukela ngeMaelstrom ne-EasyEnvelopes futhi kufanele imali. Ngise-faculty e-Oklahoma State University futhi ngisebenzisa i-CopyPaste ngokuyinhloko lapho ngixhunywe kufayela eliyinhloko le-OSU ekhaya. Kuyasiza kakhulu futhi konga isikhathi ukwazi ukukopisha ukubhaliswa kwekilasi lonke ngasikhathi sinye kunokushintsha ubheke emuva nasesikrinini esisodwa ngasikhathi; iqiniso lokuthi ngingaqeda nawo wonke ama-caps abantu bekhompiyutha ababonakala bekhetha i-icing kwikhekhe.
Madoda: Izigqoko zami kuwe. Umbuso omkhulu waba ngcono kakhulu, ngokungangabazeki ngakho. Ngisanda kuyilayisha futhi ngichithe imizuzu engamashumi amathathu edlule ngibheka izici zayo. Ngithanda kakhulu i-windoid entsha entantayo. Futhi, ngiyabonga kakhulu ngomsebenzi omkhulu. Nginifisela impumelelo enkulu nonke, futhi ngezinsiza ezinjengalezi, nizoba nenhlanhla enkulu. JS
Ngifuna nje ukukwazisa ukuthi i-CopyPaste yinto enhle kakhulu eyenzekile kusukela ngeSystem 7.5. Ngicabanga ukuthi kufanele ucele i-Apple ukuyifaka ekuthuthukiseni uhlelo olulandelayo. Futhi, ngiyabonga ngokuthuthuka okukhulu. Don
SIBONGA KAKHULU NGOKWENZA OKUSHA! Le yi-shareware engcono kunazo zonke engake ngazisebenzisa! Qhubeka nomsebenzi oncomekayo. UJamie
Ngibe nenhlanhla yokulanda isandiso sakho se-CopyPaste V 2.5.4 namuhla kusuka kuCompuServe futhi ngicabanga ukuthi simayelana nokusetshenziswa okuhle kakhulu kwesici se-Clipboard engisibonile kuze kube manje futhi uqinisile impela ukuthi i-Apple kufanele isifake njengengxenye ye isoftware yohlelo. JL
Ngikuthola kuwusizo ngempela. U-EL
NgoLwesihlanu olwedlule ngithumele imali yami ye-shareware kuwe yi-Special Delivery snailmail yalolu hlelo olungenhla oluhle. Yeka ukonga isikhathi okumangalisayo! Ngijabule kakhulu ukuthi ngiyitholile futhi ngiyinikeze isivunguvungu. Kuwufanele wonke amasenti nokuningi. RT
Ngithole ukuthi i-CopyPaste inikeza usizo kakhulu kunanoma yimaphi ama-clipboard amaningi. JW
Bengifuna ukukwazisa ukuthi bengidlala nezinhlelo ezahlukahlukene ezifana nezakho futhi nginqume ukuthi eyakho ibingcono kakhulu ngokusetshenziswa kalula futhi, ikakhulukazi ikhono layo lokuhlangana nezinye izinhlelo. I-RL
Ngisanda kuthumela imali engu- $ 20.00 shareware (ukheshi) ye- “CopyPaste 2.5.4 (US).” I-CopyPaste wuhlelo oluhle! I-DS Arizona, e-USA
Le yingxenye yesoftware engakholeki futhi ngijabule ukuhambisa imali yami ngayo! Eminyakeni embalwa edlule ngike ngazama izinhlelo eziningi 'zamabhodi wokunamathisela amaningi', kepha kuze kube manje bengingakaze ngithole isitebele esanele ukusebenza kahle kwi-Mac yami. (Lokhu kufaka, ngiyakholelwa, izinhlobo zangaphambilini zeCopyPaste, futhi!) Ngisebenzisa iMacintosh LCII esheshisiwe yaya ku-33MHz 040 nge-accelerator ye-Daystar. Ngine-8MB yenqama yangaphakathi, ehlanganiswe kuze kufike ku-32MB isebenzisa i-RAMDoubler kanye ne-freeware RAMDoubler PUMP. Njengamanje nginezithonjana ezingama-61 ezibonisa esikrinini sami ekuqaleni, ngakho-ke ungacabanga ukuthi kwakubaluleke kangakanani kimi ukuthola uhlelo oluzinzile olunjengeCopyrightPaste 2.5.4 olungeke luphazamise umshini wami ngazo zonke lezo zandiso namaphaneli wokulawula. O, nginamathela kuSystem 7.1. Nginayo ne-CD-ROM, i-hard drive yangaphandle, iSyQuest Removable Hard Drive, kanye ne-flatbed scanner exhunywe kwi-Mac yami. - Azikho izingxabano! NGIJABULELE kakhulu ngalo mkhiqizo, futhi ungangicaphuna, uma ufisa! I-RT Toronto, Ontario, Canada
Ngingumfundi waseThai e-Australia. Kade ngisebenzisa isoftware yakho isikhashana futhi ngiyayithanda kakhulu. I-CopyPaste yakho iyasiza kakhulu futhi isebenza kahle ngaphandle kwenkinga nhlobo. KE eThailand
I-CopyPaste ibe lula kabi kimi emasontweni ambalwa bengiyisebenzisa. Ikakhulu, 'iyasiza lapho ngenza izimpendulo zezikhalazo zomthetho (ngingummeli), okudinga ukusetshenziswa okuphindaphindwayo kwemisho ethile noma izigaba. JF Maine, e-USA
Sawubona, ngingu-14 futhi ngihlala e-NY. Ngilayishe isoftware ye- "CopyPaste" futhi ngiyithola ilusizo kakhulu. Uqinisile… kungani i-Apple ingazange ikucabange lokhu? I-RP, eNew York City, NY, e-USA
Vele ulande i-CopyPaste. Angikawafundi amadokhumenti okwamanje, kepha ngemizuzu embalwa yokulinga ngibona ukuthi lesi isandiso esisheshayo engisibonile esikhathini eside. Angisakwazi ukulinda ukufika kubhuku lokuhlola bese uthumela ngo- $ 20. Ngenani labantu be-shareware ababambayo futhi abangakhokhi, lokho kungazwakala kuhlekisa-kepha ngikujabulele ukusebenzisa isoftware yakho yonke. UWJ Novi, MI USA
Inothi elisheshayo lokukwazisa ngijabule kakhulu ngomkhiqizo wakho. Sicela ubheke isheke lami okufanele lifike ngasekupheleni kwaleli sonto. JB
I-CopyPaste yakho yangakwesokudla kufanele ibe yingxenye yesoftware eyisisekelo. DM Riverdale GA USA
I-CopyPaste impela uhlelo olukhulu losizo! MC Encino, CA USA
Umngani wami usanda kunginika ikhophi yohlelo lwakho lwe-Sika, Kopisha, Namathisela. Ngiyayithanda! Kokunye ukubhala kwami ​​kufanele ngisebenzise imishwana ephindaphindwayo noma amagama. Kuyashesha futhi kulula ukusebenzisa amabhodi wokunameka amaningi we-CopyPaste bese usebenzisa amarekhodi ama-macros. Omunye waleyo mibono okwenza uzibuze ukuthi kungani kungekho noyedwa owacabanga ngayo ngokushesha. Kufanele kube yimishini ejwayelekile kuyo yonke ikhompyutha. Ifanele u- $ 20. Okufakiwe uzothola isheke lami. I-BT Mobile, AL USA
Kuyamangalisa! Ngibheke phambili ekutholeni lonke uhlelo! I-JM Key Largo, FL USA
Ingxenye * engcono kakhulu ye-shareware engiyitholile. Ngizimisele ngisho ukuyikhokhela !! Ngiyabonga CC Concord, NH, e-USA
Okufakiwe isheke lami le- $ 20. Luhlelo oluhle kakhulu. Uhlelo lwakho lunconywe kakhulu kumagazini kaMashi we-MacToday umagazini wanyanga zonke. Siyabonga ngohlelo oluwusizo kakhulu. TW Tampa, eFlorida, eU.SA.
Kungukusetshenziswa okuhle kakhulu kweziqeshana eziningi engikubonile. Ngiyabonga DM Grapeview, WA USA
Bengilokhu ngisebenzisa iMac kusukela ngo-1986. Bengilokhu ngifuna okuthile okunginikeza amakhono amaningi wokukopisha nokunamathisela kusukela ngosuku lokuqala. Ngisebenzise yonke i-shareware noma umkhiqizo wezohwebo owavela futhi ngawathola ukuthi angaba yi-buggy (aphikisana nezinye izigidi zezandiso enginazo ohlelweni lwami) noma okunzima ukuzisebenzisa (kufanele kube lula njengomyalo-c noma awufanele umzamo). Angikaze ngithole eyodwa ebengiyithanda futhi ebengizoyisebenzisa ngize ngithole eyakho. Bengingenathemba lokuthi izosebenza ngoba konke okunye kwehlulekile, kepha ngijabule kakhulu ngeCopyPaste. Qhubeka nomzamo omuhle! UDK Brockport, NY USA
Siyabonga ngocezu olukhulu lwesoftware! I-SF Newark, DE USA
Umkhiqizo Omkhulu! SW Fountain Valley, CA USA
Le kude futhi ikude kakhulu ne-shareware engiyicoshe esikhathini eside. Ngijabule ngokwengeziwe ukukhokha imali ye-shareware yalena. Wenze umsebenzi omuhle lapha. RR Ridley Park, PA USA
I-CopyPaste-Best Shareware Utility ka-96. La magama ayiqiniso ngokusobala. Lokhu kuyinsiza enhle futhi ngiyakujabulela kakhulu. Qhubeka nomsebenzi oncomekayo!! I-VR Vancouver, BC Canada
Ngiyilandile, ngiyizamile, ngiyayithanda, nansi i- $ 20. WL Canada
Ngijabule ngohlelo lwakho. I-AH Almonte, Ontario Canada
Lokho ebengikade ngikufuna iminyaka! I-GB Davis, eCalifornia USA
I-CopyPaste iyithuluzi elincane elimangalisayo, elisebenzayo. Ngiyabonga RB Winnipeg Canada
I-CopyPaste ipholile angikholwa. UTHANDO ukuthi lusebenza kanjani kalula. Merci! UJR Camarillo, CA USA
Kuyintokozo yami ukubhalisa i-CopyPaste. Okufakiwe isheke lami. Ngilande umkhiqizo wakho owesabekayo kwaZiffDavis Net / Mac ngeCompuServe. Angicabangi ukuthi ngiyijabulele kanjani iMac kule minyaka eyisishiyagalolunye edlule kukhawulelwe kubhodi yokunameka eyodwa kuphela. Ukushayisana phakathi kwezingxenye zombhalo omude noma phakathi kwemibhalo eminingi yokuhambisa izinto eziningi bekukhungathekisa kakhulu. I-CopyPaste iyithuluzi lokukhiqiza langempela. Ngiyaphinda futhi ngiyanihalalisela futhi ngiyabonga ngomsebenzi owenze kahle. GR
Yeka isipho engisitholile ngesonto eledlule kumngane wami! Siyakuhalalisela nge-CopyPaste yakho. Ngiyabonga kakhulu ngokuhlela le nsiza edumile. JC Quebec Canada
Kopisha / Namathisela, isiqeshana esihle sesoftware. I-LB Scottsdale AZ USA
Kungisindisa kakhulu isikhathi esiningi lapho ngihlela ukulanda kungene kulwazi lwami. GH Glendale, MS USA
Yeka usizo olupholile! MM
Ngiyabonga ngokwenza impilo yami ibe lula kakhulu. ($ 20 kuseposini) SH
Njenge-ex-Atari ST enginayo, ku-ort yonyaka ukuze ngibe ne-PowerMac, ngivame ukukhala ngeqiniso lokuthi kunebhodi yokunameka eyodwa kuphela. Ngabe i-Apple * ingakwenza kanjani lokho? Ngibuzile! Ngakho-ke ngiyabonga nge-CopyPaste. Lokhu kwenzelwa ukukwazisa ukuthi namuhla ngikuthumelele isheke labahambi elingama- $ 20, eligunyazelwe wena (okusele kusukela ekuvakasheni kwami ​​eGrand Canyon, eMonument Valley, eYellowstone, njll, ngoSepthemba odlule. Luhambo olungakanani lolu!) UDH Birmingham, eNgilandi
Ngithathe uhlelo lwakho oluhle kakhulu ngolunye usuku, futhi manje angikwazi ukuhlala ngaphandle kwalo, ngithola isheke namuhla, ngethemba lokuthi lizobe seliphumile lapha ngoLwesihlanu. KT
Ngithumele imali yami yokubhalisa kuwe futhi ngibheke phambili ekutholeni i-password-Key. Ngithole i-CopyPaste v2.5.4 ku-America-Online. Yilokho ebengikade ngikufuna. Siyabonga ngokuzikhandla kwakho! LL Burlington, Iowa USA
Ngiyayithanda i-CopyPaste! CS San Francisco, California USA
Uhlelo Olukhulu JB Monroe MI USA
Umsebenzi omuhle! DB Hillsboro NOMA USA
Kuhle kakhulu !!!!!!!! AD Chicago, IL USA
“ICopyrightPaste Pro ivele ihlale ngemuva, ilindele ukusetshenziswa, iqoqe ngokwethembeka futhi igcine noma yini oyikopisile noma oyisikile, ilungele ukunamathisela izinto lapho uthanda khona. Ngaphandle kohlu olude lwezici zamandla, izisekelo zanele ukukuqalisa futhi kulula ukusetha nokusebenzisa.
Umuntu othile obizwa ngokuthi yi-CopyPaste Pro Time Machine yebhodi lakho lokunameka. Yize ingabukeki njengeTime Machine, ithwebula futhi igcine cishe noma yini ongayikopisha kwi-Mac yakho futhi iyenze itholakale noma nini ngokuzayo ukuze inamathiselwe. ”
- UJack D. Miller, Mac360 12/5/14 (isixhumanisi)
“Ukuthuthuka kwejubane uma unokuhlela okuphindaphindwayo okufanele ukwenze kuyamangalisa. Lokhu ngokuqinisekile kuyithuluzi lamandla lomsebenzisi wamandla futhi kuthola isilinganiso seGearhead kwabangu-5 kwabangu-5. ” - UMark Gibbs, iNethiwekhiWorld 6/17/14 (isixhumanisi)
Bheka enye yezinto engizithandayo zeMac. Ibizwa ngokuthi yi-CopyPaste Pro. Kuyimenenja yebhodi yokunameka eningi. Lokho kusho ukuthi noma yini oyinqumayo noma oyikopishayo igcinwa kumtapo wezincwadi ukuze ikwazi ukunamathiselwa futhi ngokuhamba kwesikhathi ngaphandle kokuyithola bese uyikopisha futhi. Leso yisikhathi esikhulu sokonga. - UTera Thomas O'Brien, TeraTalks, 5/16/14 (isixhumanisi)
Uma kukhulunywa nge-Mac yami, iningi lokushumayela ongalizwa liphathelene nezipele nezinsiza ezimbalwa ze-Mac ezibalulekile; lawo mathuluzi amancane enza kangcono kunalokho okwakhiwa i-Apple ku-OS X. Nakhu okunye okuhle kakhulu. Izokukwenza uphumelele kakhudlwana, unembe, futhi ukhiqize, okuzokwenza ukuthi ube ngumuntu onobuhle. CopyPaste. - UJack Miller, Mac360 1/8/14 (isixhumanisi)
"Uma Ubungaba Nethuluzi Lokukhiqiza Elilodwa Ku-Mac Yakho Bese Ukhetha i-CopyPaste Pro" - UJack Miller, Mac360 9/13/12 (isixhumanisi)
“I-CopyPaste Pro mhlawumbe iyithuluzi eliwusizo ongakaze wazi ukuthi uyalidinga. Izici zayo ezibaluleke kakhulu zikhulisa umkhiqizo wakho wansuku zonke. ” - UBen Harvell, iMacLife 6/17/11 (isixhumanisi)
I-MaCity Italian Blog 8/1/11 - I-CopyPaste Pro uhlelo lokusebenza lokunameka oluhamba phambili lwe-Mac.
Ukubuyekezwa kwe-AppStorm 7/4/11 - UJames Cull 9 kwabayishumi
Amagundane e-MacWorld 4 ngoJuni 2003
Ukubuyekezwa kweMacUser UK nguCraig Grinnel 4/3/03
I-VERDICT: I-CopyPaste X ngokushesha iba yimisuka ebalulekile ye-4.5 Amagundane
IHouston Chronicle kaBob Levitus 2/13/03
IMacUsers Shareware Utility Award ku- KopishaNamathisela
Novemba Mac Magazine
Indatshana yeMacWeek nge KopishaNamathisela
IMacintosh Disability Shareware neFreeware
Ukubuyekezwa KwamaTidbits we KopishaNamathisela
AbakwaShareware Junkies bavotile KopishaNamathisela Uhlelo oluhle kakhulu lweMacintosh lonyaka
Umkhiqizo Wosuku LweMacintosh News Network
Thenga Okuhle kakhulu kwi-MacDirectory
Ukubuyekezwa Kwe-MacNet Journal
Kimi, usuku olungenayo i-Mac shareware download usuku ngaphandle kwelanga. Kungakho ama-hard drive ami amabili enezinsiza ezincane ezidabukisayo ezilahliwe.
Ngake ngabathanda. Ngenze njalo. Okosuku. Okweviki. Noma amahora ambalwa nje. Futhi-ke, awu, ngivele ngakhohlwa ngezinto ezincane ezineshwa. Isikhathi esincane kangaka, izinhlelo eziningi kakhulu. Umhlaba onzima. Futhi iqiniso ukuthi, iningi labo alikaze likwenze engikudinga ukuthi bakwenze - basheshise imisebenzi yansuku zonke nokucasula okuphindaphindwayo kwekhompyutha.
Okuwukuphela kwento engihlale ngiyiqiniso kuyo yi-CopyPaste ehlala njalo ethandekayo evela kubantu abathandekayo eScript Software (manje eyiPlum Amazing). * I-CopyPaste iyisandiso sokuthi, lapho uvuthwa, ikunikeza amabhodi wokunamathisela ayi-100 onganamathisela kuwo izingcezu ezibalulekile nezicucu zemibhalo, ama-URL owadingayo nanoma yini nje ofuna ukuyigcina bese uyayisebenzisa futhi. Okomhleli osebenza kwi-Mac kukuncane kwezulu nge $ 21 US nje.
Kepha ungathathi izwi lami ngalo. Njengayo yonke i-shareware ungayilanda, izame futhi uma uyizonda, bese uyivumela ukuba ithambe kwenye indawo ekhoneni le-hard drive yakho kuze kube, lapho usudlulele ngokweqile, uhlanza konke ukuphuma (njengalokho okuzokwenzeka.)
UPeter Wilson, iVancouver Sun
"Ngiyayiqalekisa i-Apple ngokungangivumeli ukukopisha izinto ezingaphezu kweyodwa ngesikhathi." Kepha makabongwe abahleli abanomusa. KuShareware.com, ngithole uhlelo lokusebenza olwandisa amakhono ami okukopisha kayishumi. Amathuluzi wokucubungula umbhalo weCopyPaste akuvumela ukuthi ushintshe ikesi, ithebhu, noma ufake amafayela wombhalo, izithombe, nemisindo ebhodini lokunamathisela - iphalethi elintantayo ligcina ithrekhi yokuthi ikuphi. Okucocekile kakhulu ingobo yomlando yesiqeshana, efaka izinto ezikopishiwe kufolda kudeskithophu yakho - elula kakhulu kubaphenyi be-inthanethi. ”
“Kulabo abenza noma yiluphi uhlobo lokubhala, iCopyPaste-X iyithuluzi eliyigugu okulula ukufundwa, futhi uma usuqala ukulisebenzisa, uzozibuza ukuthi wake wazwana kanjani ngaphandle kwalo. Amagundane angu-4.5 kwangu-5 ”- ngaphezulu…
UNancy Carroll Gravley, IMac Observer
UPeter Wilson, I-Vancouver Sun Article
“Is vous voulez gérer totalement vos presse-papiers (les sauvegarder, les éditer, les organizer par thème), CopyPaste is fait pour vous. De même, si vous voulez être aidé à la saisie, sa fonctionnalité yType peut vous aider. Et vu la densité de possibilités, les 30 $ demandés ne semblent pas exagérés. ”
“I-CopyPaste Pro iyisibonelo sohlelo lokusebenza oluguquguqukayo ngoba, ngokungafani nezinye izinhlelo zokusebenza zokukhiqiza, inokusetshenziswa okuningi okuhlukahlukene. Abathuthukisi bathuthukile ekusebenzeni kwekhompyutha okuyisisekelo futhi imiphumela ingobuhlakani.
Umthuthukisi weCopyPaste Pro, iPlum Amazing, ubonakala ekhombisa lokhu kwezinye izinhlelo zayo - ethatha izinhlelo ezilula zohlelo bese uzipompa zigcwele i-oomph nezinye izici ezengeziwe.
ICopyPaste Pro ingisizile impela ukonga isikhathi futhi kuyinjabulo ukuyisebenzisa - elula futhi ecebile ngesici. Abanye abantu bangacabanga, noma kunjalo, ukuthi intengo yokuthengisa engu- $ 30 yalolu hlelo incane kakhulu ongayisebenzisa kuhlelo nje olulula kepha uzothola ukuthi uma usuyitholile, uzozibuza ukuthi wake wakwenza kanjani ngaphandle kwayo. ”
“Alukho usuku oludlulayo engingasebenzisi ngalo i-Copy Paste. Ngiyabonga futhi ngosizo oluhle kakhulu. ” - URobert Towers
Ukushaywa KwaseJalimane 10/27/14
IMacworld 15 Nov 2010
NgisebenzaLesi 16 Nov 2010
CopyPaste Pro - enye yezinhlelo zokusebenza zami ezibalulekile
ngu-Marcel Dufresne, ngoMeyi 28, 2020
IMacGeek Podcast Septhemba 2 2019
Ephreli 22, 2019 - Ukubuyekezwa kweTech Today nguKerry Dawson
I-athikili enentambo esuka ku-1997 mayelana ne-CopyPaste
Xhuma ku-CopyPaste ezinqolobaneni zomlando ze-Macintosh Repository.
Umtapo wolwazi weZDNet kusuka ngo-1998
I-CopyPaste Winner ye-Award evela kwi-MacUser